Wararka - Saamaynta badweynta xamuulka qaada ee wakhtiga dhow
Saamaynta xamuulka badweynta sare ee wakhtiga dhow
Waxay u badan tahay inay noqoto xilli-gaaban oo Christmas-ka ah alaab-qeybiyeyaasha Mareykanka iyo Yurub.
Degdegta Kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaysa, laakiin baahida xooggan ee loo qabo badeecadaha macaamiisha, yaraanta shaqada, dib u soo kabashada COVID-19 iyo saamaynta domino ee ay keeneen duufaannada ayaa xannibay dekedo badan oo muhiim ah oo adduunka ah, dib u dhigista badeecadaha, oo sababay qiimaha xamuulka oo sarreeya. iyo xitaa dhibaatooyin xagga maraakiibta ah.Silsiladda sahayda adduunka ayaa sidoo kale burburtay.
Xogtu waxay muujineysaa in celceliska waqtiga ay ku qaataan dekadaha maraakiibta konteenarada ee adduunka oo dhan ay hadda taagan tahay 370 saacadood, ku dhawaad ​​​​9 jeer ka badan ka hor cudurka faafa. awoodda caalamiga ah, iyo kor u qaaday qiimaha maraakiibta.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah falanqeeyayaasha maraakiibta ayaa xusay in Shiinaha, baahida gaadiidku ay hoos u dhacday xoogaa markii hagaajinta badeecada iyo kobaca dhoofinta ay hoos u dhacday, iyo sida cabbiraadaha awood qaybsiga ee gobollo badan ay keentay in wakhti dheer la keeno amarada shirkadaha gudaha.
"Isticmaalka-bari iyo Isticmaalka-Galbeed ee dhoofinta ayaa ku socday isbeddel hoos u dhac ah ilaa dhammaadka Sebtembar oo hadda waxay ku dhow yihiin inay kala bar ka noqdaan meeshii ugu sarreysay."Shanghai oo ah wakiilka xamuulka ee mas'uulka ka ah ayaa yiri.
Iyaga oo ka faa'iidaysanaya qiimaha rarida ee hooseeya, shirkadaha qaar ayaa dardargeliyay baabi'inta alaabada, iyo amarada sidoo kale waa kordhay.
Marka la eego Lu Zhengwei, oo ah madaxa dhaqaalaha ee bangiga warshadaha, dhoofinta Shiinaha ayaa weli ah xoogga ugu weyn ee lagu xakameynayo sicir bararka caalamiga ah. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo qiimaha alaabta ceeriin iyo qiimaha xamuulka uu sii socdo kor u kaca, qiimaha dhoofinta Shiinaha ayaa sidoo kale kor u kacaya, kaas oo laga yaabo inuu yeesho saameyn cusub oo ku saabsan xaaladda dhaqaalaha adduunka.
Iyada oo bilawga jiilaalka ee cirifka Waqooyi, xaalada faafitaanka caalamiga ah waxay u badan tahay inay ka sii dari doonto.Xaaladda dhowaan ka sii daraysa ee cudurka faafa ee Yurub iyo Mareykanka ayaa mar kale saameyn xun ku yeeshay ganacsiga caalamiga ah.
Iyadoo la tixgelinayo qiimaha maraakiibta ee hadda iyo qiimaha konteenarada ayaa weli ku jira heer sare, kharashyada saadka ayaa sii wadi doona inay baabi'iyaan faa'iidada shirkadaha dhoofinta ee khuseeya waxayna saameynayaan shaqada iyo horumarinta ganacsiga.
Hablaha Baaskiilka Baaskiilka, Baaskiil/Baaskiilad 12 Inj ah, Baaskiilada dheelitirka, Dumar Buur Baaskiil, Baaskiilada Baaskiilka Baaskiilada, 20 Inj Baaskiil/Baaskiilad,